Nosakanan’ireo mpikatroka Holandey momba ny toetrandro ny fidirana ao amin’ny Minisiteran’ny Toetrandro hitakiana ny famoahana ny “Shell Papers” · Global Voices teny Malagasy
Mangataka ny mangarahara kokoa avy amin'ny governemanta Holandey ireo mpikatroka
Voadika ny 15 Marsa 2021 5:15 GMT
Sary avy amin'ny kaonty Instagram Extelltion Rebellion Netherlands, nahazoana alàlana.Photo from Extinction Rebellion Netherlands Instagram account, used with permission.
Raha nifantoka tamin'ny fitokanana ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden tamin'ny 20 janoary izao tontolo izao, dia andro voalohany nandraisan'ny minisitry ny raharaham-bahiny sy ny toetrandro Holandey Bas van ’t Wout's ny raharahany ihany koa io. Mpikatroka momba ny toetr'andro maherin'ny 70 manohitra ny “fitantanana tsy mahomby” nataon'ny governemanta tamin'ny krizy momba ny toetr'andro sy ny tontolo iainana no niandry azy tao.
Nosakanan'ny Extinction Rebellion Netherlands (XRNL) ny vavahady lehibe fidirana ao amin'ny Minisiteran'ny Raharaha ara-toekarena sy ny toetrandro Holandey tao La Haye, ary nalefa tany amin'ny varavarana ilany ao amin'ny tranobe ny fifamezivezena. Nilaza tamin'ny fanambarana an-gazety ny mpitondra tenin'ny XRNL, Lucas Winnips hoe:
Mitaky amin'ny Minisitera ireo mpanao fihetsiketsehana mba tsy hampiasa ny volam-bahoaka hanampiana ny akoranafo milevina sy ny hamoahan'ny governemanta Holandey ny ‘Shell Papers,’ izay tahirim-pifandraisan'ny governemanta amin'ny orinasa iraisampirenena. Ity fihetsiketsehana ity no hetsika farany tsy misy herisetra natao tamin'ny Ministera.
Mitondra sora-baventy marevaka misy ny fangon'ny Extelltion Rebellion, mpanao fihetsiketsihana 70 mahery no nanakana ny varavarana fidirana tao amin'ny minisitera nanomboka tamin'ny 8 maraina. Betsaka no nanao tohivakana mba ho sarotra amin'ny polisy ny manala azy ireo. Vao tonga ny hariva, dia efa nisy mpitandro ny filaminana marobe ary nisambotra mpanao fihetsiketsehana 23 izy ireo rehefa tsy nety niala teo an-toerana ny sasany, raha ny tatitra voaray avy eo an-toerana.
Hoy ny vakin'ny sora-baventy: “Hofaina ho an'ny mpandraharaha maintso”, manondro ny tranoben'ny Minisitera ao ambadik'ireo mpanao fihetsiketsehana, “Mihidy noho ny tsy fahaiza-mitantana”, ary “Matahotra ny hanan-janaka aho noho ny krizy ara-toetrandro.” Hoy ny mpanao fihetsiketsehana iray tao amin'ny Instagram Live an'ny vondrona fa nisy mpiasan'ny Minisiteran'ny Toetrandro nanao lahateny “mampihetsi-po” na eo aza ny loza mety hitranga amin'ny fanaovana fihetsiketsehana manoloana ny toeram-piasany.
Tsy vao sambany ny vondrona toetrandro no nanao fihetsiketsehana manohitra ny politikan'ny Minisitera. Tamin'ny 20 Oktobra 2020, nibodo am-pilaminana ny efitranon'ny Minisitera ny mpanao fihetsiketsehana XRNL. Tamin'io andro io ihany dia namoaka fanambarana tao amin'ny Twitter ny Minisitera, nanasa ireo mpanao fihetsiketsehana mba”hihaona atsy ho atsy.” Tsy fantatra mazava na nisy izany fhaonana izany na tsia.
Taorian'ny fihetsiketsehana Oktobra 2020, nikarakara “hetsika teny an-dalambe” teo anoloan'ny tranoben'ny Minisitera ny XRNL tamin'ny 17 Novambra, 5 Desambra ary 12 Desambra. Tamin'ny 6 Janoary, nanoratra tamin'ny tsaoka ireto “fikarohana voamarina ara-tsiantifika” manaraka ireto teo am-baravarankelin'ny tranobe ireo mpikatroka XRNL:
Niteraka fisamborana 15 ny fihetsiketsehana tamin'ny 6 Janoary, hoy ny tatitry ny NLTimes.
Manome vola amina miliara euro isan-taona ho an'ny indostrian'ny akoranafo milevina ny governemanta Holandey, amin'ny endrika fampihenan-ketra amin'ny ankapobeny. Araka ny taratasy nosoratan'i Eric Wiebes, izay minisitry ny raharaha ara-toekarena sy ny politika momba ny toetrandro teo aloha, dia tafakatra 4,5 miliara Euros ireo fanampiana ireo. Na izany aza, nahita ny Milleaudefensie, fikambanana tsy miankina Holandey misahana ny tontolo iainana, fa ambony kokoa ny habetsaky ny fitosaky ny fanampiana ara-bola avy amin'ny governemanta Holandey mankany amin'ny akoranafo milevina. Tamin'ny fanadihadiana navoaka tamin'ny volana Jolay 2020, nilaza izy ireo fa “manohana orinasa lehibe mpandoto tontolo mitentina 8,3 miliara euro isa-taona ny governemanta.” Samy nilaza ny Milleaudefensie sy XRNL fa mifanohitra amin'ny fampanantenan'ny governemanta Holandey hampiato ny fanampiana ny akoranafo milevina amin'ny taona 2020 io famatsiam-bola io.
Nahasarika ny saina manokana ihany koa ny orinasan'ny angovo Shell. Ny “Shell Papers” dia tetikasa iraisan'ny mpanao gazety avy amin'ny Platform for Authentic Journalism (PAJ) sy ny Follow the Money (FTM) izay manadihady ankehitriny ny fifandraisan'ny governemanta Holandy sy ny orinasan-tsolika sy solitany iraisampirenena Anglisy-Holandey. Iray amin'ireo orinasa mpandoto indrindra eto an-tany ny Shell.
Nametraka fitoriana ara-dalàna 17 ho an'ny andrim-panjakana maromaro ny PAJ, mitaky ny famoahana “ny antontan-taratasy rehetra — toy ny mailaka, memo, antontan-taratasy momba ny fanaovan-dalàna, ary na dia ny hafatra WhatsApp aza — hatramin'ny 2005 izay niaviany, nomena, na momba ny Shell.” Araka ny tantara avy amin'ny PAJ, ny tanànan'i Assen irery ihany no nanaiky ny fangatahana hatreto, na dia nahazo tsindry ara-dalàna avy amin'ny minisiteran'ny Toekarena sy ny toetr'andro aza ny tanàna.
Tsy toa an'i Alemaina sy Italia, ny “governemanta Holandey dia tsy mamoaka ny tahiry momba ny fanampiany amin'ny akoranafo milevina, na ny fanampiany manimba ara-tontolo iainana ,” hoy ny tatitra tamin'ny taona 2017 nataon'i Laurie van der Burg sy Matthias Runkel.